‘पापीहरुले मेरी छोरीको बलात्कार गरे, पञ्‍चायतले हत्या’ – Makalukhabar.com
मकालु खबर	 Sep 18, 2020 मा प्रकाशित 425
ललितपुर/सप्तरी । सप्तरी जिल्लाको डाकनेशवरी नगरपालिका वडा नं ७ ललितपुरकी रधियादेवी मण्डल सोमबार ब्रतमा थिइन् । ब्रत बसेका कारणले उनले खेतको आली काट्न आफ्नी छोरीलाई पठाइन् । आमाले अह्राएपछि साहिली छोरी १७ वर्षिया संगीताकुमारी मण्डल खेतको काम गर्न घरबाट निस्किइन् ।
१२–१३ वर्षअघि भारतको पञ्जाब गएका रधियादेवीका पति फर्केर आएका छैनन् । रधियादेवीले छोरीसँग सल्लाह गरिन्– भोलि गएर प्रहरीमा बलत्कारीविरुद्ध उजुरी दिने । तर, दिउसो रधियादेवीलाई पञ्चहरुले पञ्चायतमा बोलाए । ‘मलाई गाउँको कुरा गाउँमै मिलाउनुपर्छ भनेर पुलिसमा उजुरी नगर्न भने । मैले त्यो निर्णय नमान्ने र पुलिसमा उजुरी दिने बताएँ । त्यसपछि घरमा विक्षिप्त भएर बसेकी मेरी छोरीलाई पञ्चायतमा बोलाइयो,’ उनले सुनाइन्, ‘म नुहाउन गएको बेला छोरीलाई पञ्चायतमा लगेछन् ।’
जेनतेन मजदु गरेर उनले जेठा छोरालाई कमाउनका लागि बिदेश पठाएकी छन् । जेठी छोरीको ५ वर्षअघि बिहे गरिन् । संगीताबाहेक एक छोरी र छोरा घरमा छन् । ‘गरिबको जीवन जसोतसो चलिरहेको थियो, पापीहरुले हेर्न सकेनन्,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नै खेतबारीमा जाँदा पनि छोरीचेली बलात्कृत हुनुपर्ने ? अनि पञ्चहरुले नगदमा मिलाउन खोज्ने ? यही हो न्याय ?’ –कान्तिपुरबाट
मकालु खबर 1526 खबरहरु0टिप्पणीहरू